We Fight We Win. -- " More than Media ": သူတို့ ကျောခိုင်း သွားကြလေပြီ။
သူတို့ ကျောခိုင်း သွားကြလေပြီ။
she said " ~~~~~~~~~ "
သမဒ said "~~~~~~~~~~"
media asked "~~~~~~~~~"
she answered "~~~~~~~~~"
she took all my sincere to her since she watched football match with mother f~~kers!!!!!
then I felt , she is ~~~~~~~~~!!!!
this is the third time she is misleading to haveaVICTORY FOR ALL BURMESE!!!!
6 January 2012 at 00:24
ပုဆိုးချုံထဲက လက်သီးပြတတ်တဲ့ခွေးမသား မင်းသွားလုပ်ပါလား၊ victory လိုချင်ရင် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ကြလေ၊ အပြစ်တင်ဖို့ အချောင်နိုက်ဖို့ပဲတတ်တဲ့ ကောင်တွေ မင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေမရှိမှ မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်မယ်